DAAWO: Mucjizadii Maalgashiga Qarniga miyey noqonaysaa Dekeda Garacad
GAALKACYO(P-TIMES) – Dad badan oo Soomaaliyeed la yaab ayay ku tahay in dhisme deked casri ah laga hirgalinayo dalka dagaalada iyo burburka ka soo kabanaya ee Soomaaliya, haddana kaaga sii darane Dekeddan waxaa lacagta ku baxaysa baxsanaya dad Soomaaliyeed waana arrin kale oo is weydiin mudan.
Maamulka sare ee gacanta ku haya mashruuca dhismaha dekeda Garacad ayaa maanta kusoo bandhigay shirka maalgashiga ee Garoowe, fursadaha ka furan iyo arrimaha muhiimka ah ee ay tahay in qeyb laga qaato.
Guddigu waxay baahiyeen in la shaqada badda gudaheeda laga qabanayo ay bilaabanayso 20 September oo jimcaha soo socda ku beegan, waana arrin aan caadi aheyn waana Maalgashi aan gacmo shisheeye gacan ku laheyn.
Dadka gobalka Mudug & Geeska Afrika waxay u tahay mashruuca Tijaabo ah oo labo dhinacba saameyn culus u yeelan doona, haddii uu guuleysto sida qorshuhu yahayna lasoo afjaro Bisha August 2021-ka, waa talaabo horey loo qaaday.
Guddigu waxay kaloo shaaciyeen in dhismahan oo dhan laga soo afjarayo sida jadwalku yahay 21ka bisha August, waa deked tartan adag mug-weyn lagalaysa dekedaha gobalka kuyaala oo ay ku jiraan kuwa Khaliijka.
Isimo, Ganacsato iyo dad xeeldherayaal ah ayaa mashruucan gacanta ku haya, waxaana dhismahan qandaraaska qaatay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, waxayna shirkaddu maanta shaacisay in ay qabto rajo weyn oo ah in ay dhismahan waqtigaas ku dhameystiraan.
Waxkasta oo camal fiican ah ee la qabanayo waxay u baahan yahiin isku day iyo u adkaysi baaxad leh.Insha ALLAAH furdada laga dhisayo magaalada garacad ee gobalka mudug ee soomaaliya dhaqaalaha lagu dhisayo waxaa la baxay dad shacab soomaaliyeed ah oo dawladaha puntlaan iyo xamar midna waxba kuma darsan.
Ujeedadaydu waa haddii ay shacabka soomaaliyeed helaan nabad iyo dawlad karti leh ayagaa suubsan lahaa mashruucyo aad muhiim u aha oo ay dadka soomaaliyeedna ka faa’iidi lahaayeen.Maamulka itaalka daran ee laga sheego xamar iskadaa waxuu soomaali taree waxuu ku mashquulsan yahya in uu DUMIYO MAAMUL GOBALEEDYAYII HORAY U DHISNAA).
Labada nin ee xamar jooga labaduba way diideen in ay DHAGAX DHIGAAN FURADA GARACAD.Yaase sugay oo waxba uga baahanaa.Way is ceebeeyeen.Ina farmaajo markuu diiday in uu dhagax dhigo furdada Garacad waxuu aaday Hobyo oo uu DHAGAX DHIGAY XEEBTA HOBYO.Miskiin ilaahay.